Hormuud Salaam Foundation oo Laptop u qaybisay ardaydii guuleysatay (SAWIRRO) | Dhacdo
Hormuud Salaam Foundation oo Laptop u qaybisay ardaydii guuleysatay (SAWIRRO)
Ardaydan oo soddon ahayd ayaa ku guuleystay barnaamijka deeqda waxbarasho ee Hormuud Salaam Foundation, sanadkiisii labaad.
Munaasabad lagu qabtay Xarunta Hay’adda Hormuud Salaam Foundation ee Magaalada Muqdisho ayaa ardayda lagu guddoonsiiyay Laptop-yada, waxaana guddoonsiiyay Madaxda Hay’adda.
Guddoomiye Kuxigeenka Hormuud Salaam Foundation, Cabdiraxman Ibraahim Cilmi oo ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in Laptop-yada ay muhiim u yihiin waxbarashadooda.
Cabdullaahi Nuur Cismaan, Gudoomiyaha Hay’adda Hormuud Salaam Foundation ayaa isna sheegay in deeqda waxbarasho loogu talagalay in loo soo saaro dadkii dalkan mustaqbalka wax-u-tari lahaa, waxaana uu kula dardaarmay ardayda in waqtigooda iyo nasiibkooda ay ka faa’iideystaan oo ay ka natiija keenaan waxbarashada, isla-markaana ay dib u milicsadaan juhdiga waalidiintooda ay ku soo bixiyeen.
Guddoomiyaha ayaa sheegay in ay samayn doonaan wecyigelin iyo tababaro xilliyada fasaxa ardayda, taasi oo looga faa’iideynaayo ardayda in sare loogu qaado garaadkooda, isagoo hoosta ka xariiqay in hawlaha Hay’ada hormuud Salaam Foundation ay sal u yihiin horumarinta dalka.
Hormuud Salaam Foundation ayaa ardayda sidoo kale ka caawin doonto tasiilaadka ay u baahan yihiin muddada ay waxbarashada ku guda jiraan, marka laga soo taggo in lacagta ay wax ku baranayaan ay hay’addaasi bixisay, waxaana xusid mudan in arday kasta uu si madaxbannaan u doortay kulliyadda uu xiiseynayo.
Waa sanadkii labaad oo xiriir ah oo la bixinayo barnaamijka deeqda waxbarasho ee Hormuud Salaam Foundation, waana deeq waxbarasho oo sanadle ah, oo shirkaddu bilowday April, 2019, iyadoo ujeedka loo aasaasay-na uu yahay in la daboolo baahida waxbarasho ee dalka.